China AH slurry pump iraba impeller ifektri kanye nabaphakeli | I-YAAO
Slurry futha impeller angadlala indima ebaluleke kakhulu ekusebenzeni slurry futha. Ngokuzungezisa, kungasiza slurry futha ukuhlangabezana nezidingo zemishini. I-slurry pump impeller kulula ukuba igugwe, ngakho-ke sifuna izinto ezikhethekile zokwelula isikhathi sempilo yempepho.
Kusetshenziswa impompo zenjoloba yenjoloba ukubhekana nesilayidi esonakalisayo ngezinhlayiya ezibuthuntu. Zenziwe ngenjoloba yemvelo, irabha yokwenziwa, i-EPDM Rubber, iNitrile Rubber, noma enye njengoba udinga.
Sakha ngokuziqhenya impellers yenjoloba yenjoloba esezingeni eliphezulu nezinye izingxenye ezithatha indawo yempompo ethile edumile ekhiqiza, eyi-100% REVERSE
KUNGASHINTSHA, asikho isidingo sokushintsha isitoko sakho.
Izinga eliphakeme, izingxenye zepompo eziqinile nezikhathi zokulethwa okusheshayo yizinga lethu. Sisebenzisa kuphela izinto zekhwalithi ezinesimo sokukhiqizwa kobuciko nokucaciswa kwezobuchwepheshe ukuqinisekisa ukumelana kokugqoka okuphezulu nempilo yokugqoka ende kuzinhlelo zokusebenza ezifuna kakhulu.
* Slurry futha isakhiwo
* Izinto ezenziwe ngekhwalithi
* Impilo yokugqoka enwetshiwe yenani elikhulu
* Ukulula kwesondlo
* Amanani wokuncintisana
* Izikhathi zokulethwa okusheshayo
* Ubufakazi obunelungelo lobunikazi
* Izingxenye eziguquguqukayo kalula
* Unique stock izixazululo
* Ukutholakala komhlaba wonke nobuchwepheshe
* Uhlobo lwezinto zenjoloba ze-YAAO® Nezincazelo Zedatha
Ikhodi ye-YAAO Igama lezinto ezibonakalayo Thayipha Incazelo
Injoloba Yemvelo I-YR26 injoloba yemvelo emnyama, ethambile. It has ephakeme ukuguguleka ukumelana zonke ezinye izinto in emihle kuyizinhlayiyana slurry izicelo. Ama-antioxidants nama-antidegradents asetshenziswe ku-RU26 enzelwe ukuthuthukisa impilo yokugcina nokunciphisa ukonakala ngesikhathi sokusetshenziswa. Ukumelana nokuguguleka okuphezulu kwe-RU26 kunikezwa yinhlanganisela yokuqina kwayo okuphezulu, amandla aphezulu wokuqina nobulukhuni be-Shore ephansi.
Injoloba Yemvelo I-YR33 iyirabha emnyama yemvelo ebangeni eliphansi yobulukhuni obuphansi futhi isetshenziselwa isishingishane kanye nempompo yokuhambisa impahla kanye ne-impellers lapho izakhiwo zayo eziphakeme zomzimba zinika ukwanda kokumelana nokusika kuma-slurries aqinile, abukhali.
Injoloba Yemvelo I-YR55 injoloba yemvelo emnyama, elwa nokubola. It has ephakeme ukuguguleka ukumelana zonke ezinye izinto in emihle kuyizinhlayiyana slurry izicelo.
YS01 I-EPDM Rubber I-Elastomer yokwenziwa
YS12 Nitrile Rubber I-Elastomer yokwenziwa I-Elastomer YS12 iyirabha yokwenziwa esetshenziswa kakhulu ezinhlelweni ezibandakanya amafutha, uwoyela nama-wax. I-S12 inokumelana nokuguguleka okulingene.
I-Elastomer yokwenziwa I-YS31 iyi-elastomer engamelana namachibi nokushisa. Inokulinganisela okuhle kokumelana namakhemikhali kuwo womabili ama-acid nama-hydrocarbon.
YS42 I-Polychloroprene (i-Neoprene) I-Elastomer yokwenziwa I-Polychloroprene (i-Neoprene) iyi-elastomer enamandla amakhulu enezakhiwo ezinamandla kuphela engaphansi kancane kunenjoloba yemvelo. Ayenziwa kancane ngezinga lokushisa kunenjoloba yemvelo, futhi inesimo sezulu esihle kakhulu nokumelana ne-ozone. Iphinde iveze ukumelana okuhle kawoyela.
* I-YAAO® wuphawu lokuhweba olubhalisiwe futhi ayimele noma ayihlangene nganoma iyiphi indlela neWarman® yeWeir Minerals Group. Onke amagama, izinombolo, izimpawu nezincazelo kusetshenziselwa inkomba kuphela futhi akusho ukuthi noma yimaphi amaphampu noma izingxenye ezifakwe kuhlu zingumkhiqizo wamaWarman Pumps.
* I-YAAO® slurry pump expeller ring iyashintshana kuphela ne-Warman® slurry pump expeller ring.
* Lo mbhalo uyimpahla ye-YAAO® Pump futhi awunakukhiqizwa kabusha noma udalulwe kumuntu wesithathu ngaphandle
Langaphambilini Slurry Pump Expeller Ring
Olandelayo: Ulwelwesi lwe-YCVX-Hydrocyclone